News Collection: आनी बनेकी कोहिनुर मारवाडीकी बुहारी !
आनी बनेकी कोहिनुर मारवाडीकी बुहारी !
एक समयकी चर्चित मोडल कोहिनुर सिंह सांसारिक जीवनदेखि वाक्क भएर भिक्षुणी बनेको खबर मिडियामा चर्चाको बिषय बनेको थियो । उनी भिक्षु बनेको तस्वीर पनि देखिएको थियो । तर, निकै समय भयो उनको चर्चा नभएको । बिबाह नै नगर्ने घोषणासहित भिक्षु बनेकी सिंह कहाँ गइन होला भनेर कसैले खोजी गरेन् ।
पछिल्लो समाचारअनुसार अहिले उनी मारवाडी समुदायको एक ब्यापारिक घरानाको बुहारी बनेकी छन् । बिभिन्न उद्योग चलाउने र त्यसबापत करोडौं रुपैयाँ भ्याट छलि गर्ने ब्यापारिक समूह गोल्यान समूहकी सदस्यमात्र हैन निर्देशकसमेत बनिसकेकी छन् ।
भारतीय बाबु र नेपाली आमाकी छोरी दीपा सिंह मोडलिङमा लागेपछि कोहिनुर सिंह बनेकी थिइन् । पछि उनी आनी लोसाङ डोल्मा बनिन् । र, अहिले बनेकी छन दीपा गोल्यान ।
मोडलिङ दुनियाँमा रमाइरहेकी कोहिनुरलाई शंकर गोल्यानका कान्छा छोरा साहिलले मन पराएका थिए । तर, परिवारले उनलाई बिबाहको अनुमति दिएन् । त्यही लफडाका कारण आनी बन्न हिडेकी कोहिनुरले झण्डै एक बर्ष आनी जीवन बिताइन् । उता, छोराको बिहे भारतका ब्यापारीकी छोरीसँग गरिदिन शंकर गोल्यानले जहाजमा जन्ती लिएर दिल्ली पुगे । तर, साहिलले बिहेको अघिल्लो दिन होटलबाट भागेपछि गोल्यान परिवार दुलहीबिना रित्तो हात नेपाल फर्कियो । अन्ततः साहिललाई कोहिनुरसँग बिबाह गर्ने अनुमति दिइयो ।